Sheekh Cabdilaahi Cabdi Cali Oo Saaka Ku Geeriyooday Magaalada Hargeysa - FOOLAAD MEDIA
Home » Diinteena Suuban » Sheekh Cabdilaahi Cabdi Cali Oo Saaka Ku Geeriyooday Magaalada Hargeysa
Ilaahay naxariistiisa Janno haka waraabiyee waxaa saaka degmada Ibraahim Koodbuur gaar ahaan xaafadda Xero Awr ee magaalada Hargeysa ku geeriyooday Sheekh Cabdilaahi Cabdi Cali oo ka mid ahaa hal-doorka culimada Somaliland.
Sheekha ayaa muddooyinkan dambe u jiifay xanuuna, waxaana haatan si xooggan uga socda magaalada Hargeysa abaabulka Janaasada oo duhurnimada haddii Eebbe ogolaado lagu aasi doono xabaalaha Baqiic ee Waqooyiga magaalada Hargeysa.
Muddo ku dhow 20 Sanno waxa uu Sheekh Cabdilaahi Cabdi Cali maamule kasoo ahaa madarasadda caanka ah ee Al-Furqaan. Sidoo kalena sheekhu wuxuu khadiib ka ahaa Masjidka Al-Furqaan. Waxaana sheekhu ahaa Geesi lagu yaqaanay Hal-adayg iyo dhiiranaan, isagoo aan cidna uga waaban jirin sheegista xaqqa.
Madarasadda Al-Furqaan oo ka kooban dugsi hoose, dhexe iyo sare-ba ayaa jirta muddo ka badan 20 Sanno, waxaanay iyada iyo dhawr mac-had oo kale horseed u ahaayeen madarasadahii diiniga ahaa ee Sagaashameeyadii dhidibada u taagay manhajka Salafka.
Sheekha ayaa dhanka kale ka mid ahaa culimada ugu firfircoon isla markaana kaalinta laxaadka leh kasoo qaatay fidinta iyo kobcinta dacwadda. Waxaanu dhaska ka afuufay isla markaana uu majaraha u qabtay madarasadda Al-Furqaan oo burburi gaadhay xilliyadii ay bilawga ahayd.
Sheekhu waxa uu ifka kaga tagay Labo Xaas iyo caruur door ah. Waxaanay Bahda Shabakadda FOOLAAD MEDIA ay halkan tacsi uga dirayaan dhammaan Qoyskii, Qaraabadii iyo guud ahaan ummadda muslimiinta ah ee uu ka baxay Sheekh Cabdilaahi Cabdi Cali.